“Waxaa jira cabasho ka imaaneysa Odayaasha beelaha iyo Somaliland, marka iima muuqato in arrimahaas si fudud lagu xalin karo..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
“Waxaa jira cabasho ka imaaneysa Odayaasha beelaha iyo Somaliland, marka iima muuqato in arrimahaas si fudud lagu xalin karo..”
Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating oo wareysi siiyay BBC-da ayaa shaki geliyay in doorashada dalka Soomaaliya ay ku dhici karto waqtigii loo qabtay.
Mr. Keating ayaa sheegay inaysan aqbali doonin khilaaf siyaasadeed kale oo soo baxo xilligaan gabaabsiga ah, taas oo xilli kasta keenta dib u dhac doorasho, isagoona dhinaca kale tilmaamay dib u dhaca ku yimid jadwalkii doorashada ay markii hore ahayd in hogaamiyeyaasha dhameystiraan nidaamka doorashada.
Wuxuu sidoo kale Mr. Keating saadaaliyay in bilaha soo socda ay doorashadu dhici karto, isagoona sheegay inuu shaki weyn ka qabo qabsoomida doorashadaasi islamarkaana ay u muuqato in dib u dhac markale ku imaan karo waqtigii loo qorsheeyay doorashada Soomaaliya.
“Waxaa weli Muqdisho ku shirsan hogaamiyaasha Madasha wadatashiga Qaran oo isku dhagan kana shiraya doorshada iyo sidii loo wajihi lahaa, waxaa jira cabasho ka imaaneysa Odayaasha beelaha iyo Somaliland, marka iima muuqato in arrimahaas si fudud lagu xalin karo” Sidaas waxaa yiri Danjire Michael Keating.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka Ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Micheal Keating ayaa kusoo beegmaya xilli xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ay weli ka soconayaan shirka madaxda madasha wadatashiga qaran,waxaana jirta inay madaxdaasi ay weli isku heystaan arrimo badan oo u baahan in xal laga gaaro, si uu dalka uga dhaco doorasho rasmi ah.